Daawo Video-gan: Ma sameyn lahayd wixii uu sameeyay Taksi wadahan? - Caasimada Online
Home Warar Daawo Video-gan: Ma sameyn lahayd wixii uu sameeyay Taksi wadahan?
Daawo Video-gan: Ma sameyn lahayd wixii uu sameeyay Taksi wadahan?
Weli waxaa adduunka jooga dad daacadnimadu ay ku weyn tahay. Waxaa laga yaabaa dad badan inay durbaba oran lahaayeen waa doqon, marka aad eegto wixii uu sameeyay Adam Woldemariam, oo ah taksi wade ka shaqeysta magaalada Las Vegas, ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka.
Adam oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Ethiopia ayaa bishii tagtay waxa uu gaarigiisa ka helay boors uu kaga tagay qof uu soo qaaday.
Hase yeeshee markii uu furay boorsada, waxa uu arkay wax uusan weligiis fileyn inuu mar qura noloshiisa arki doono. Waa lacag kaash ah oo dhan 221,510 (laba boqol labaatan iyo kow kun shan boqol iyo toban) dollar.
Waxa uu ka yaabiyay dad badan markii uu qaaday lacagtaasi uuna u geeyo qolada shirkadda taksiga, si loo siiyo qofkii lahaa, waxaana markaa kadib ninkii lahaa lacagta uu abaal marin ahaan u siiyay laba kun oo Dollar, oo ah kaliya boqolkiiba hal, lacagta.
Halkan ka daawo dhacdadaas.
Haddaba Ma sameyn lahayd wixii uu sameeyay Taksi wadahan?